Ogbe Pyrolysis Osisi, Pyrolysis Osisi - LYBH
Anyị Nye High Qualityequifo
Mgbe sorting isi obodo bi ahihia, nwere n'efu plastik site n'ikuku ana enweta n'otutu-oyi akwa drum draya mgbe ihicha, feeder ka gasifier, oku mgbe ihicha, cracking, chlorination, Mbelata mmepụta, combustible gas ọcha site ịgba, gas-mmiri mmiri nkewa, na mgbakwunye na mmiri dị na ụlọ elu juru n'ọnụ na-akụda, iji kpo oku ọkụ ọkụ na-ere ọkụ, uzuoku si na mmiri ọkụ maka igwe eji agba ọkụ iji mepụta ọkụ eletrik, enwere ike iji ya maka ụmụ amaala. Ihe ọ ...
Product Ihe: The n'efu mmanụ imu imu molekụla distillation ngwá adopts agụụ atomization flash ngwa ngwa distillation technology, nke bụ dị iche iche site na omenala distillation ịdabere na esi ebe dị iche nkewa ụkpụrụ, (n'ihi na ihe atụ, omenala esi ebe dị iche nkewa bụ banyere 600 Celsius C , mgbe akwa agụụ molekụla distillation technology bụ banyere 350 Ma) ọ na-adabere na ihe dị iche na pụtara free ụzọ nke molekụla ngagharị nke dị iche iche ...
Product Ihe: Plastic crusher site na moto ụgbọala a mma mma efere na elu na-agba, na na usoro nke elu-ọsọ adiana nke na-akpụ akpụ mma mma na-etolite na-emekarị nke ikwu ije nke mma na mma ọdịiche na-guzobere n'etiti shiee plastic egwepịa mbepụ mere site nnukwu iberibe plastic na-agbajikwa, agbajikwa mgbe plastic on plastic urughuru size site na ihuenyo ntupu nyo mmepụta. Pịnye LYBH-PS800 Remark dayameta nke ntụgharị igwe 420mm ...
Ihe omuma: 1. Igwe ikuku oku na-ekpo ọkụ na njikwa nke akụrụngwa akụrụngwa niile ka emebere ma mee n'onwe anyị, nke nwere ike hụ na nchikota n'etiti ihe dị iche iche ma belata ọdịda nke nhazi nke akụkụ ọ bụla kpatara. Ọbụna ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, enwere ike idozi ya na ọsọ ọsọ. Igwe ọkụ a na-ekpo ọkụ na-anakwere ụdị ihe na-agwakọta, nke nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke okpomọkụ, nwere ike inweta okpomọkụ dị elu, mepụta ikuku ọkụ ọkụ, dị mfe ilekọta, nwere ike ...
Nkọwapụta Ngwaahịa: Dịka ngwa njikọta nke electromechanical nwere oke nke akpaaka, enwere ike kee ụzọ abụọ n'ime usoro ise: usoro ikuku, usoro mgbanye, sistemụ nlekota, sistemụ mmanụ na sistemụ kọmputa. Usoro nnweta ikuku Ọrụ nke sistemụ ikuku bụ inye nri ikuku site na ụfọdụ ikuku ikuku na olu ya n'ime ụlọ ọkụ. Ihe omuma ya bu: shei, moto oku, ihe nkpuchi oku, ikuku oku oku, onye na-acho mmiri, ihe omimi, CAM regulat ...
Qingdao Longyuan Baihong Machinery Equipment Co., Ltd emi odude ke Tsingtao, Shandong Province.The ụlọ ọrụ na-agwakọta European na American elu uzu na imewe echiche. Ọ na - arụpụta osisi pyrolysis. Companylọ ọrụ ahụ agafeela asambodo ISO9001, asambodo CE na asambodo ndị ọzọ nke SGS. Ọ bụ teknụzụ teknụzụ dị elu nke na-arụ ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ dum na ọrụ n'ozuzu ya, imepụta, n'ichepụta, ntinye na inye ọrụ, ọzụzụ teknụzụ, yana ọrụ ahịa.
BASF SE tinyere nde euro 16 na Pyrum Innovations AG, ụlọ ọrụ ọkachamara na teknụzụ pyrolysis n'efu, nke dị na Dillingen / Saarland, Germany. Site na itinye ego a, BASF ga-akwado mmeba nke Pyrum's pyrolysis osisi na Dillingen na nkwalite ọzọ nke ...
Enviro na Michelin kwenyere na usoro nkwekọrịta mmekọrịta
Stockholm-Scandinavian Environmental Systems (Enviro) na Michelin emechaala nkọwa nke ọrụ imegharị mmegharị nke taya, ọnwa isii ka emechara karịa ka atụburu anya ya. Ndi otu abuo a abanyela ugbua na okwu nkwekorita nke ndi mmadu mebere ha ...
Egwuregwu Pyrolysis Egwuregwu Gburugburu nke Enyi na Enyi
Ahịa Mmanụ Pyrolysis zuru ụwa ọnụ (2020-2025) -Ọganihu, nddị na amụma
Isi ihe na-eme ka mmepe nke ahịa ahụ bụ ọchịchọ na-arịwanye elu maka mmanụ pyrolysis eji eme ihe ọkụ na ọkụ eletrik, yana ọchịchọ na-arịwanye elu na mpaghara mmanụ ọkụ. N'aka nke ọzọ, nsogbu ndị metụtara nchekwa na njem nke mmanụ pyrolysis na conditio na-adịghị mma ...
Nrụgharị plastic-nkọwa nke azụmaahịa kemịkal nke ndị nrụpụta plastik mbụ tinyere SABIC dọtara uche
N'afọ gara aga, nkọwa gbasara azụmaahịa kemịkal nke ndị nrụpụta plastik mbụ gụnyere SABIC dọtara uche. | Casimiro PT / Shutter N'ime ọnwa iri na abụọ gara aga, ndị nketa na-emegharị plastik nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe na ya-omume abụghị naanị na ejighị n'aka ...
Imefusị rọba, Ogbe Pyrolysis Osisi, Imefusị Taya Recycling Machine, Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Taya Pyrolysis,